RASMI: Man United Oo Ka Badbaaday Isreeb Reebkii Europa League Iyo Man City Oo Ay U Mahad Celinayaan. - Gool24.Net
Manchester United ayaa si rasmi ah ugu soo baxay heerka guruubyada UEFA Europa League ee xili ciyaareedka soo socda waxayna uga mahad celinayaan kooxda ay dariska yihiin ee Man City.
Inkasta oo ay Manchester United la murugoonayso in Man City ay magaalada Manchester ugu dabaal degayso saddexda koob, haddana wali waxay uga mahad celinayaan in ay Watford ku garaaceen finalkii FA Cupka.
Manchester City ayaa xasuuq wayn u gaysatay kooxda Watford ee finalkii Wembley Stadium ee FA Cupka, waxayna guushani walwal badan ka dul qaaday maamulka Man United.
Haddii ayna Man City ku guulaysan lahayn koobka FA Cupka, Man United waxay gali lahayd isreeb reebka Europa league loogu soo baxayo iyada oo waliba isla bisha July dib u bilaban lahayd xili ciyaareedka cusub.
Laakiin hadda markii ay Man City ku guulaysatay FA Cupka waxay Man United ka nasatay walalkii ahaa in ay soo galaan wareegyada isreeb reebka loogu soo baxayo Europa League.
Kooxda Wolves ayaa sidoo kale ka faa’iiday in Watford lagu garaacay finalkii FA Cupka waxayna hadda Wolves u soo baxday Europa League oo ay xili ciyaareedka cusub ka tartami doonto.
Manchester United oo buuqa iyo dabaal dega Man City ee koobabka Premier League, League Cup iyo FA Cupku uu dhegaha ka dawikhiyay ayay wali nasiib daro u tahay in ay ku faraxsan tahay guul ay gaadhay koox ay xifiltamaan taas oo muujinaysa heerka ay United hadda ku sugan tahay.
Guusha Man City ee FA Cupka ayaa saamayn ku yeelatay kooxaha Man United, Liverpool iyo Wolves kuwaas oo ay mid kastaba faa’iido gaar ah u abuurtay.
Liverpool waxay guushii FA Cupka ee Man City ka faa’iiday in ay Community Sheild la ciyaari doonto Man City furitaanka xili ciyaareedka cusub halka Man United iyo Wolves ay soo bixitaanka Europa League ka faa’iideen guuldaradii Watford.
Si kasta ha ahaatee, kulamadii saaxiibtinimo ee Man United ee la kansali lahaa haddii ay Watford ku guulaysato FA Cupka ayaa hadda u socon doona sidii loo qorsheeyay.